Khilaafka doorashada: Maxay tahay sababta ay Gedo xudunta ugu noqotay khilaafka? - BBC News Somali
Waa la cusbooneysiiyay 6 Febraayo 2021
Madaxweyne Farmaajo iyo Axmed Madoobe (SAWIR HORE)
Waxaa xalay fashil iyo natiijo la'aan ku soo dhammaaday shir madaxda dowladda federaalka iyo maamul-goboleedyada Soomaalida uga socday magaalada Dhuusamareeb oo lagu waday in heshiis laga gaaro qodobo ku harereysan hshiis doorashada ee dhinacyada ay magaalda Muqdisho ku gaareen bishii September ee sanadkii hore.
Kulamadii madaxda maamul-goboleedyada iyo madaxweyne Farmaajo ayey arrintaas hareysay, waxaana muuqata inay arrintaasi caqabad ku noqotay in heshiis laga gaaro sidii doorasho dalka ay uga dhici lahayd. Ujeedada waxay tahay sidii ay mowqif mideysan uga gaadhi lahaayeen arrimaha doorashada ee uu muranka xooggan ka taagan yahay. Laakiin arrinta Gedo ayaa hareysay shirarkii Muqdisho.
Hadda, markale ayey Gedo xudun u noqotay khilaafka la xiriira arrimaha doorashada Soomaaliya, Ka dib markii madaxweynaha Jubbaland uu sheegay in "ay doonayaan in gobolkaas lagu soo celiyo gacanta maamulkiisa".
"Annaga ayaa xaq u leh inaan doorashada qabanno, dowladda federaalka ahna waxa ay xaq u leedahay waxay ku qoran yihiin warqadaha aan soo saarnay, meesha aan ku qaban karno ayeyna ku qabsoomi doontaa, inta ka horreysana waxaan filayaa in deegaannada ay gacanta maamulka dib ugu soo noqon doonaan," ayuu yiri madaxweyne Axmed Madoobe.
Balse, dowladda federaalk Soomaaliya ayaa u muuqata in arrintaas aysan aqbalin, waxayna ku adkeysaneysaa in ciidamada Dowladda aanan laga saareyn gonbolka, taas oo ah mid uu Axmed Madoobe dalbaday.
Xigashada Sawirka, Jubbaland State House
Madaxda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa dhawaan heshiis ku gaaray shir ka dhacay Muqdisho
Arrimaha fasiraadda u baahan ee ku xeeran heshiiska Dhuusamareeb
Mas'uuliyiinta Jubbaland waxay ku andacoonayaan in shan degmo oo ka mid ah gobolkaas ay dowlada dhexe iyadu maamusho, ayna mas'uuliyadda ciidanka ka howlgala halkaas u dhiibtay taliyeyaal iyada ka amar qaata.
Degmooyinka Gobolka Gedo - marka laga reebo degmada Ceelwaaq - dhamaan inta kale waxay hadda hoostagaan Dowlada Federaalka, waxaana muuqata in arrinytani ay noqotay mid ay labada dhinacba ay ku gorgortamaan.
Doorasho dadban ma noqon kartaa mid hufan?
"Hannaanka doorasho ee ay ku heshiiyeen madaxda heer federaal iyo heer maamul goboleed, Axmed wuxuu ka ahaa xubin, asagoo runtii matalaadda uu meeshaas ku fadhiyo aysan ku qanacsaneyn inta badan dadka reer Jubbaland haddana wax baa lagu heshiiyay si kastaba ha u adkaadaane waa lasoo dhaweeyay, hadduu ka baxo wixii lagu heshiiyay waa arrin isaga gaar u ah. Gedo Axmed kama hadli karo, isagu gacanta kuma hayo, doorashaduna way ka dhaceysaa Gedo." Ayuu yiri Cabdiraxmaan, Wasiirka Kuxigeenka Arimaha Gudaha Jubaland oo BBC Somali u warramnay bilowgii September.
Hardanka xildhibaannada ka soo jeeda Gedo
Madaxda Puntland iyo Jubbaland ayaa ku sugan Muqdisho
Balse weli waxaa taagan su'aalo la iska weydiinayo in xitaa haddii dowlada dhexe ay ogolaato inay Baladxaawo ka qaado ciidankeeda, qaabka mar kale la isigu waafiqi karo in maamullo cusub loo sameeyo Gobolka Gedo.
Xigashada Sawirka, MAXAMED QANI KUUSOOW
Cabdirashiid Xasan Cabdinuur(Janan)
Doorashada Soomaaliya: Dalka ma yeelan karaa dhowr madaxweyne ka dib bisha February?
Doorashada Soomaaliya: Yaa qaadi doono mas'uuliyadda dib u dhaca ku yimaada hannaanka?
13 Disembar 2020
Doorashada Soomaaliya: Maxay ka wada hadli doonaan Rooble iyo Deni?
Doorashada Soomaaliya: Xalku waa guurti dhexdhexaad ah iyo hab-raac loo siman yahay
Ma waxaa dib usoo xoogeystay khilaafkii Muqdisho iyo Kismaayo?
21 Agoosto 2020
7 Maarso 2020